COVID-19 – Healthy Life Journal
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဖောင်ဒေးရှင်းက ကူးစက်မှုအများဆုံးဖြစ်ပွားနေသည့် ရန်ကုန်မြို့တော်တွင် နေထိုင်သူများကို Covid -19 ကာကွယ်ရေးပညာပေး W ၃ လုံး လှုပ်ရှားမှု စတင်ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဇန်နဝါရီ ၁၉ ရက်နေ့က ပြောကြားခဲ့သည်။ ရက်သတ္တပတ် ခြောက်ပတ်ကြာကာလကြာမြင့်မည့်...
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ဂျော်ဒန်နိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လာသူ ၆ ဦး၏ ဓာတ်ခွဲနမူနာများတွင် စစ်ဆေးတွေ့ရှိရသည့် Covid-19 မျိုးဗီဇက ကူးစက်မြန်အမျိုးအစား မဟုတ်ကြောင်း ရန်ကုန်၊ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာမြတ်ထွဋ်ညွန့်က ပြောသည်။ “ ဂျော်ဒန်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့...
COVID-19 ကာကွယ်ဖို့ ဘာကြောင့် PPE ၀တ်ကြတာလဲ၊ မျက်စိ၊ နှာခေါင်းနဲ့ ပါးစပ်ကို ကာကွယ်ရင် မပြီးဘူးလား
—–၊ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ဖြေကြားသည်။ ၊—– ကိုဗစ်လူနာတွေကို ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေက ကူးစက်နိုင်ခြေ သိပ်များပါတယ်။ အမှုန်အမွှားက ကူးစက်တယ်။ သေဆုံးမှု (၃) ရာခိုင်နှုန်း ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် လူနာနဲ့ထိတွေ့မယ်လူမှန်သမျှက PPE (Personal Protective Equipment)...
ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးသူတွေက ပိုးပြန်ဝင်နိုင်ခြေ (Reinfection) ဘယ်လောက်ရှိပါသလဲ
—–၊ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ဖြေကြားသည်။ ၊—– Q. ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးသူတွေက ပိုးပြန်ဝင်နိုင်ခြေ (Reinfection) ဘယ်လောက်ရှိပါသလဲ ဆရာ။ A. ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးသူတွေမှာ ယေဘုယျအားဖြင့် သူရဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ်က ငါးလအထိ ခံနိုင်တယ်ဆိုပြီး လေ့လာမှုတစ်ခုက ဆိုထားပါတယ်။ ဒီငါးလအတွင်း...
—–၊ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင်(အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ဖြေကြားသည် ၊—– Q. ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးသူတွေမှာ ဘယ်လိုနောက်ဆက်တွဲ ကျန်းမာရေးဝေဒနာတွေ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါသလဲ ဆရာ။ A. ကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့သူ လူငယ်အများစုက လျင်လျင်မြန်မြန် ပြန်ကောင်းကြတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ထိခိုက်မှု နည်းပါးတတ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အခြေခံရောဂါရှိသူတွေနဲ့ သက်ကြီးပိုင်းအရွယ်မှာတော့ ကိုဗစ်ပျောက်ပြီး...
Home Quarantine ထားချိန်မှာ ကိုဗစ်သံသယလူနာတွေနဲ့ တစ်အိမ်ထဲမှာ ဘယ်လိုယှဉ်တွဲနေထိုင်ကြမလဲ . . .
———၊ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊——— ကိုဗစ်သံသယလူနာတွေကို Home Quarantine ထားရှိမယ်ဆိုရင် လိုက်နာရမယ့် နည်းလမ်းတွေကို ကျန်းမာရေးနဲ့ အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ (၁) သံသယရှိသူက နေအိမ်အတွင်း (ဒါမှမဟုတ်) ခြံဝန်းအတွင်းသာ နေရပါမယ်။ အပြင်သို့...
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ကိုဗစ်-၁၉ နှင့် ပတ်သက်၍ ရုတ်တရက်အနံ့ပျောက်ခြင်းက အရေးကြီးသော အချက်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ဆေးတက္ကသိုလ်(၁) ရန်ကုန်၊ ဆေးပညာဌာန၊ ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး ပါမောက္ခဒေါက်တာ ဇော်လင်းအောင်က အောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်နေ့ ကိုဗစ်အကြောင်းသိကောင်းစရာ အမေး-အဖြေအစီအစဉ်တွင်...